SARUDZA MUTAURO Afrikaans Ahanta Aja Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Attié Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Zimbabwe) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Comorian (Ngazidja) Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Efik Emberá (Catío) Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kannada Kazakh Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latgalian Latvian Lenje Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nias Niuean Norwegian Nuer Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Ponapean Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Thai (Northeastern) Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Unoziva Zvapupu zvaJehovha zvingani? Vamwe vedu tingava vavakidzani vako, tingave tichishanda newe kubasa kana kuti tichidzidza newe kuchikoro. Kana kuti tingave takambokurukura newe nezveBhaibheri. Tinombova vanaani chaizvo, uye nei tichifamba tichikurukura nevanhu zvatinotenda?
Takangoitawo sevamwe vanhu. Tinobva mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana. Vamwe vedu taimbova mune zvimwe zvitendero uye vamwe vakanga vasingatendi muna Mwari. Zvisinei, tisati tava Zvapupu, tose takazvipa nguva yokunyatsoongorora zvinodzidziswa neBhaibheri. (Mabasa 17:11) Takabvumirana nezvatakadzidza, tikabva tazvisarudzira kunamata Jehovha Mwari.
Tinobatsirwa nokudzidza Bhaibheri. Kungofanana nevamwe vanhu vose, tinofanira kutsungirira matambudziko uye zvatinokanganisa. Asi nokuedza kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri mumararamiro edu ezuva nezuva, upenyu hwedu hwakavandudzika zvinooneka. (Pisarema 128:1, 2) Ndicho chimwe chikonzero chinoita kuti tiudze vamwe zvinhu zvakanaka zvatakadzidza muBhaibheri.
Tinorarama maererano netsika dzinodiwa naMwari. Sokudzidziswa kwadzinoitwa muBhaibheri, tsika idzi dzinotibatsira kuti tifare uye tiremekedze vamwe uyewo tive nounhu hwakadai sekutendeseka nemutsa. Dzinoita kuti pave nevanhu vane mafungiro akanaka uye vane chiyamuro, uyewo dzinokurudzira kubatana kwemhuri uye kuita zvakarurama. Sezvo tiine chokwadi chokuti “Mwari haasaruri,” tinozviona semhuri yevanhu vomunyika dzakawanda inobatanidzwa nezvatinotenda, isingaparadzaniswi nokusiyana kwemarudzi uye zvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo tiri vanhuwo zvavo, tiri boka rakasiyana nevamwe vanhu.—Mabasa 4:13; 10:34, 35.
Zvapupu zvakawana tsika dzipi kubva pakudzidza Bhaibheri?